Sidee inuu ka soo kabsado ka dib markii xogta nidaamka soo celiyaan in Windows / Mac
3 tallaabo inuu ka soo kabsado files badiyay ka dib markii nidaamka soo celiyo
Dhacdo khasaaraha file caadi ah ka dib markii nidaamka soo celiyo
Video tutorial ee files soo kabsanaya ka dib markii laga badiyay nidaamka soo celiyo
1 Sidee inuu ka soo kabsado ka dib markii xogta nidaamka soo celiyaan in Windows / Mac
Saaka waxaan dib u soo celisa nidaamka kombiyuutarka aan. La'aanta waayo-aragnimo, waxaan dib uma ilaa files aan, sidaas kuwa badan oo iyaga ka mid ah ayaa laga badiyay. Files waa dad aad u muhiim ii, oo ay ku jiraan waraaqaha aan warqad, oo qaali ah videos, iyo sawir kaliya laga qaaday la saaxiibkayga ugu wanaagsan. Waxaan la murugoodo ku dhawaad ​​todobaad. Sidee inuu ka soo kabsado ka dib markii faylasha nidaamka soo celiyo?
Dadka had iyo jeer ka qoomameyn ka dib markii laga badiyay ka dib markii faylasha nidaamka soo celiyo. Habka ugu wanaagsan ee ugu jaban si looga hortago khasaaro file waa inaan sameeyo hayaan. Waa hagaag, markii musiibo ah oo ay jirto gurmad jirin, aadan dhamaadka. Weli waxaa jirta si aad u hesho dib.
Kabashada A ka dib markii xogta nidaamka celin u sameyn kartid: Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac (la heli karo Mavericks). Tani software kabashada xirfad fahamsan yahay internals nidaamka loo isticmaalaa in uu kaydiyo faylasha on disk ah (nidaamka file) iyo isticmaalaa aqoontan in ay helaan meel ay disk in heystey file ah oo la tirtiray. Waxaad isticmaali kartaa inuu ka soo kabsado ku dhowaad dhammaan faylasha laga badiyay ka dib markii nidaamka soo celiyaan, oo ay ku jiraan sawirrada, videos, waraaqaha, files archive iyo in ka badan. Iyadoo sanaanayaa aad files lumay, ma ka dhigi doonaa wax kasta oo waxyeello dheeraad ah si ay xogta aad hore.
Waxaad kartaa hoos ku soo bixi version tijaabo ah Wondershare Data Recovery ah.
2 3 tallaabo inuu ka soo kabsado files badiyay ka dib markii nidaamka soo celiyo
Tallaabada 1 . Launch barnaamijka, u tag Standard Mode iyo dooran Recovery File ceeriin ah.
Tallaabada 2 . Dooro Risaalo meesha aad badiyay faylasha aad ka dib markii nidaamka soo celiyaan, iyo bilaabaan in ay iskaan.
Talaabada 3 . Ka dib markii baaritaan, Xiisaha iyo eego faylalka recoverable oo guji inuu ka soo kabsado.
3 Dhacdo khasaaraha file caadi ah ka dib markii nidaamka soo celiyo
I. No gurmad
Dadka qaar waxay u badan tahay in lagu badbaadiyo files ay ku disk C oo aan gurmad kasta. Marka nidaamka celin loo sameeyaa, taas disk la formatted lahaa, nidaamka ka hawlgala tirtiro dhammaan macluumaadka buug-isha ku disk ah, oo aan lumin doonaa files our.
Qabashada habka loo soo celiyo, dadka qaar ka mid ah si qalad ah ayaa dooran kara oo dhan cajaladaha in la formatted, sidaas dhammaan faylasha iyaga ku lumin lahaa; qaar ka mid qasan kartaa ilaa miiska Risaalo ka, iyo xogta aan la akhriyo karo oo qoraal ah; ama qaar ka mid ah waxaa laga yaabaa inaysan fahmin tilmaamaha si aad u wanaagsan oo ku tuuri kartaa xoogaa tallaabooyin ah, laga badiyay files ay.
III. Qaar kale waxay
In geeddi-socodka nidaamka soo celiyaan, arrimo kale sida darnaanta virus, gardarrada gudaha ee cajaladaha adag, ama incompatibility ee nidaamka oo dhan ay u badan tahay in ay keeni files naga lumay. Qaar ka mid ah waa editable, halka qaar ka mid ah waa lama huraan.
Talooyin: dib Faylal ay ka hor System Soo Celinta
Back up files ka hor habka loo soo celiyo waa sida ugu fiican oo jaban si looga hortago in faylasha aad laga badiyay. Waxaad samayn kartaa in la disk adag lagu kaydiyo ama xirfadle gurmad software sida Time Freeze. Wuxu u adeegaa nidaam xirfad celin software oo kaa caawinaysaa in aad soo celiyo nidaamka, saarto dhibaatooyinka PC iyo in laga hortago khasaare xogta iyadoo la kaashanayo ilaa 1,000 celin dhibcood (snapshots) idinka Abuuray. Saasaana ku aadan dhibaato doono wuxuu galabsaday files lumay kadib markii nidaamka soo celin samaysay.
4 Video tutorial ee files soo kabsanaya ka dib markii laga badiyay nidaamka soo celiyo
> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray Files ka dib markii System Soo Celinta